အစ္စတန်ဘူလ်ညဆငျးရဲဒုက်ခ Shock ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ခြင်း၏ .. Marmaray 24 နာရီ -! rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်ညဆငျးရဲဒုက်ခ Shock! ဝန်ဆောင်မှုပို့ကုန်၏ .. Marmaray 24 နာရီ
08 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အစ္စတန်ဘူလ်ညဥ့်တရားမဝင် marmaray နာရီကိုမထားခဲ့ဘူး
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအစ္စတန်ဘူလ်၏ညဉ့်အစေခံရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့် Marmaray 24 နာရီအကြာတွင်လွှဲပြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်ဝန်ကြီးဌာနထိတ်လန့်ခံစားခဲ့ရ! Marmaray နာရီ 24 ခဲ့ပါဘူး။
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် operating အဆိုပါ Marmaray အောင်ပြီးနောက်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ 24 နာရီသောကြာနေ့, စနေနေ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အရင်းအမြစ်များ၏ Marmaray ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ဖော်ပြထားခဲ့သည် IMM မြေအောက်ရထား 24 နာရီကိုငါပေးမည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, နိုင်ငံသားများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းမနေ့ကရဲ့ကြေညာချက် Marmaray ၏ညဥ့်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏နာရီကိုသုံးပါသွားပြီးနောက်ကလွန်းမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Marmaray တစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာကြုံတွေ့ 24 24 နာရီပါ!
ယခုအချိန်တွင်အဖြစ်ကြွလာကာလအတွင်းအလုပ်၏ Maramaray 24 နာရီကြာ၏ Marmaray ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်လက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရသူကပြောကြားခဲ့သည်။ '' 24 နာရီခန့်ရှိရာအစီအစဉ်များအပေါ်လုပ်ဆောင်နေ ''
24 နာရီမြေအောက်ရထားဆက်လက်! 💪🚇
ကျွန်ုပ်တို့၏သောကြာနေ့ညက Metro ဝန်ဆောင်မှုနင်္ဂနွေနေ့ညဥ့်ကိုဆက်သွယ်ထားသောနှင့်အတူအများပြည်သူအားလပ်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့, စနေနေ့နှင့်စနေနေ့ညပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကစတင်ခဲ့သည်။
မေ့လျော့မနေပါနဲ့!624 နာရီ😉မက်ထရိုလိုင်းမှာယနေ့ည
- က Metro အစ္စတန်ဘူလ် (@metroistanbul_) စက်တင်ဘာလ 6, 2019
@istanbulbld သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ 24 နာရီမြေအောက်ရထားနှင့် Metrobus လေ့လာရေးခရီးဆက်လက် အဆိုပါ @uabakanlig မလုပ်နိုင် marmaray မပြတ်မတောက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောရပ်နေသည်ကို 24 နာရီမှာတော့လူတွေပြန်တံခါးကိုဘူတာမှစေလွှတ် @ibbbeyazmas မှ
- Urcan Ugur (ထို @korcanug) စက်တင်ဘာလ 6, 2019
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ထောင်ခရီးသည်များမှာအစ္စတန်ဘူလ် 24235 ည၏ .. ပထမဦးစွာနာရီကဲ့သို့ဖြစ်၏ 01 / 09 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), နှစ်ရက်ထိုရက်သတ္တပတ်၏မြေအောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 24 နာရီဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်း၏ပထမရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 30 နှစ်ခုညဆက်သွယ်စက်တင်ဘာလမှသြဂုတ်လ 31 31, 1 နှင့် 35 သြဂုတ်လမှသြဂုတ်လ (ယနေ့) တစျထောငျကလူထက်ပိုပြီးညဥ့်မှာမြေအောက်ရထားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ IMM SözcüMurat ့လန်းငါအစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 24 နာရီကိုခစျြ "သူ၏တွစ်တာအကောင့်မျှဝေပါ။624 နာရီပင်သောကြာနေ့ညဥ့်မြေအောက်ရထားလေ့လာရေးခရီး 13288 ကို လုပ်. , စနေနေ့ 22362 ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေ၏အားသာချက်ကိုယူနေပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ တစ်ကြိမ်မှာသောကြာနေ့ညဥ့်ကျင်းပ 96, စုစုပေါင်း 13 288 ခရီးနှုန်းခရီးသည်တစ်ဦးလျှင်သယ်ယူပို့ဆောင်တထောင်ခရီးသည် 139 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 96 ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်စနေနေ့ညဥ့်ကျင်းပ ...
Istanbullites, IETT နှင့်မီထရို 24 နာရီလုပ်ငန်းခွင်စေချင် 22 / 08 / 2019 အလုပ်လုပ်İETT 24 နာရီ, သူဘတ်စ်ကားလိုင်းနှင့်လေယာဉ်ကွင်းလိုင်းများ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း shared ဟုတုံ့ပြန်မှုများ၏အများစုမှာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အချိန်များတွင်ညဉ့်အခါထံမှညဥ့်တစ်မြို့တွင်နေထိုင်သော်လည်းမီဂါမြို့အစ္စတန်ဘူလ်, အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦ။ တချို့ဘတ်စ်ကားလိုင်းများအတွက်ကြိုးစားနေ 34G 24 နာရီနှင့်အတူ Metrobus လိုင်းလည်း 24 နာရီအခြေခံအရသိရသည်အချိန်စည်းရုံး။ IETT 24 တွင် TIME န်ထမ်း SHARE ဘတ်စ်ကားလိုင်းများရှယ်ယာİETTတွစ်တာစာမျက်နှာကနေဖန်ဆင်းတော်ရှိ၏ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး၏မေတ္တာရပ်ခံချက်န်ဆောင်မှုများစာရင်းကိုထိုညဉ့်လိုင်း 24 နာရီပေးရန်;" ဟုလိုင်းများအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ RESPONSE ဒီဝေစုအောက်အစ္စတန်ဘူလ်၏ပြသ; ဒါဟာလိုင်းပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ဒါဟာအစ္စတန်ဘူလ် Marmaray ၏လူတို့အဘို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည် 19 / 11 / 2013 Marmaray အစ္စတန်ဘူလ်၏လူတို့အဘို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါ Marmaray အခမဲ့အသုံးပြုမှုကာလအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ယခု မှစ. ပိုက်ဆံပေးဆောင်တစ်ကော်လာကနေအစ္စတန်ဘူလ်ဖို့ Bosphorus အောက်မှာအခြားမီးရထားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲကနေသွားချင်သူကိုအစ္စတန်ဘူလ်တွင်နေထိုင်သူများ။ ငါ့ကိုငါသညျဤအခါသမယတွင် Anatolia နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ၏အခါသမယအတု Marmaray Marmaray တစ် belated အကဲဖြတ်အရေးကြီးသည်ထင်တဲ့အချက်လည်းထင်ရှားစေကြကုန်အံ့။ သငျသညျအစဉျအမွဲတူရကီရဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏မြေပုံကိုကြည့်ရှုခဲ့သလား ယနေ့ငါကြည့်ယူကိုချစ်လိမ့်မယ်။ အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်တစ်ဦးကြည့်အဖြစ်တူရကီအနေအထား Kore'nin ယူပါ။ "တဖန်တုံကိုရီးယား?" မပြောကြဘူးပါ။ ကိုရီးယား, ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်သုံးဆယ်နှစ်ပေါင်းကြာရှည်နိုငျသောတစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်လယ်ပိုင်းနောက်ဆုံးသုံးဆယ်နှစ်ပေါင်း ...
Ropeway စီမံကိန်း Kastamonu မြူနီစီပယ်အဆောက်အအုံစီမံကိန်းတစ်ခု၏အမြင့်ကောင်စီ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတည်ပြုမပေးခဲ့ပါဘူး 13 / 08 / 2012 ဘယ်ဟာ "Cable ကိုကားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှဆက်စပ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် Kastamonu ၏မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နာရီမျှော်စင်ကနေဖန်ဆင်းတော် Memorial High ရဲတိုက်၏ကောင်စီနှင့်စီစဉ်ထားကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိပေ။ သဘောတူညီခကျြတစ်ဦးပထမဦးဆုံးဒီဂရီ protected ဧရိယာများအတွက်ပေးထားရှိမရှိရှိရာစီမံကိန်းရဲ့gerekleştirilဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်ညွှန်ပြအရာရှိများ, cable ကိုကားတစ်စီးအဆောက်အဦသစ်ကိုလေ့လာမှုများအကြောင်းကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြပါ။ နုအသိပေးစာ၏ရှင်းလင်းချက်ပြီးနောက်ဘာသာရပ်တည်နေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ အာဏာပိုင်များ; Re-တည်ထောင်ရန်ဧကန်အမှန်အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးများစံချိန်တင်လုပ်ဖို့အရပျကိုခွင့်ပြုချက်များအတွက်အမြင့်ကောင်စီသို့လျှောက်ထားရန်ရှိသည်။ ရင်းမြစ်: Investments
Ropeway စီမံကိန်း Kastamonu မြူနီစီပယ်အဆောက်အအုံစီမံကိန်းတစ်ခု၏အမြင့်ကောင်စီ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတည်ပြုမပေးခဲ့ပါဘူး 08 / 08 / 2012 ဘယ်ဟာ "Cable ကိုကားလိုင်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှဆက်စပ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် Kastamonu ၏မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နာရီမျှော်စင်ကနေဖန်ဆင်းတော် Memorial High ရဲတိုက်၏ကောင်စီနှင့်စီစဉ်ထားကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိပေ။ သဘောတူညီခကျြတစ်ဦးပထမဦးဆုံးဒီဂရီ protected ဧရိယာများအတွက်ပေးထားရှိမရှိရှိရာစီမံကိန်းရဲ့gerekleştirilဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်ညွှန်ပြအရာရှိများ, cable ကိုကားတစ်စီးအဆောက်အဦသစ်ကိုလေ့လာမှုများအကြောင်းကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြပါ။ ပိုပြီးသတင်းဒီနေရာကိုနှိပ်ပါပေးပါ: Investments
သူ Marmaray 24 အချိန်အမှုဆောင်ခဲ့တဲ့ခဲ့ပါ
ဒါဟာအစ္စတန်ဘူလ် Marmaray ၏လူတို့အဘို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်
Ropeway စီမံကိန်း Kastamonu မြူနီစီပယ်အဆောက်အအုံစီမံကိန်းတစ်ခု၏အမြင့်ကောင်စီ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတည်ပြုမပေးခဲ့ပါဘူး
တေလာ, ဇန်နဝါရီလ၌သူ၏အလုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်စစ်ဆေးခဲ့ပါဘူး | high-မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း
ပြည်နယ်တူရကီမက်ထရိုများအတွက် MAG မှအာမမခံနိုင်ခဲ့ဘူး